အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Dec 21, 2009
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, December 21, 2009 Monday, December 21, 2009 Labels: ရသစာစုများ
ဂျင်နီ လေးဟာ တောက်ပတဲ့ မျက်လုံးလေး တစ်စုံနဲ့ အသက်၅နှစ်အရွယ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးမလေး တစ်ယောက်ပါ…
တစ်နေ့တော့ ဂျင်နီနဲ့ သူမအမေတို့ဟာ ကုန်စုံဆိုင်လေးတစ်ခုမှာ ဈေးဝယ်ဖို့ ရောက်နေကြပါတယ်… ဆိုင်ထဲကိုလျှေက်ကြည့်ရင်း တစ်နေရာမှာ လှလှပပလေး လုပ်ထားတဲ့ ပလပ်စတစ်ပုလဲ ဆွဲကြိုးလေးကို ဂျင်နီက တွေ့သွားပြီး သူ့အမေကို ၀ယ်ပေးဖို့ပူဆာပါတယ်…
” အင်း လှတော့ လှပါတယ် သမီးရယ် …. ၂.၅ ဒေါ်လာဆိုတာ ဈေးများလွန်းပါတယ်…. ပိုက်ဆံအကုန်အကျ သိပ်များတယ်.. ဒါပေမဲ့ သမီး သိပ်လိုချင်နေတယ် ဆိုရင်တော့ မေမေတစ်ခုပြောမယ်…. ဒီပုလဲဆွဲကြိုးကို မေမေ၀ယ်ပေးမယ် .. ဒါပေမဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် သမီးလုပ်ရမဲ့ အိမ်အလုပ်တွေကို မေမေက စာရင်းနဲ့ လုပ်ပေးမယ်.. အိမ်အလုပ်ကူလုပ်လို့ ရတဲ့ မုန့်ဖိုးကို သမီးက စုထားရမယ်…. ပြီးတော့ သမီးမွေးနေ့ ရောက်တော့မှာကိုလဲ မမေ့ဘူး မဟုတ်လား…… သမီးဖွားဖွားက သမီးကို မွေးနေ့လက်ဆောင် အဖြစ်နဲ့ မုန့်ဖိုးပေးဦးမယ်လေ….. သမီးက အဲဒီငွေတွေကို စုထားပြီး အခုဝယ် လိုက်တဲ့ ဆွဲကြိုးလေးရဲ့တန်ဖိုး ပြည့်တဲ့ တစ်နေ့မှာ သမီးကို ဒီဆွဲကြိုးလေး မေမေထုတ်ပေးမယ်… ကဲ ..သမီးသဘောတူသလား”
ဂျင်နီလေး သဘောတူလိုက်ပါတယ်.. အိမ် အလုပ်တွေကို နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ပါတယ်.. ရတဲ့ မုန်းဖိုးလေးတွေ စုထားတယ်…မွေးနေ့ရောက်တော့ သူမရဲ့အဖွားက သူမကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် မုန့်ဖိုး ထပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ဂျင်နီလေးရဲ့ ပုလဲဆွဲကြိုး တန်ဖိုး ပြည့်သွာခဲ့ပြီ… ဒီတော့ ပုလဲ ဆွဲကြိုးလေးကို ဂျင်နီ့အမေက ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်…..
ဂျင်နီလေးဟာ ပုလဲဆွဲကြိုးလေးကို ဘယ်လောက်တောင် နှစ်သက်မြတ်နိုးသလဲဆိုရင် အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ အဲဒီဆွဲကြိုးလေးကို ၀တ်ဆင် ထားပါတယ်… ကျောင်းသွားတဲ့အခါ၊ အိပ်တဲ့အခါ ၊သူ့အမေနဲ့ အပြင်ကို ထွက်တဲ့ အခါမှာလည်း ဆွဲကြိုးလေးကို အမြဲတမ်း ၀တ်ဆင်ထား တတ်ပါတယ်… ဆွဲကြိုး မ၀တ်ဆင်တဲ့ အချိန်ဆိုလို့ ရေချိုးတဲ့ အချိန်ဘဲရှိပါတယ်.. ဒါတောင် ဂျင်နီ့အမေက ဆွဲကြိုးလေးကို ၀တ်ပြီး ရေချိုးရင် လည်ပင်းတစ်ခုလုံး အစိမ်းရောင် ဖြစ်သွားတတ်တယ်လို့ ပြောထားတာကြောင့်ပါ…
ဂျင်နီဟာ သူ့အဖေကိုလည်း အရမ်းချစ်ခင်တဲ့ သမီးလေးဖြစ်ပါတယ်… သူ့အဖေကလည်း သူမကို ချစ်ပါတယ်.. ဂျင်နီ ည အိပ်ရာဝင်တိုင်း သူမအဖေဟာ သူထိုင်နေကျ အနှစ်သက်ဆုံး ထိုင်ခုံကလေးကနေ ထလာပြီး ဂျင်နီ သဘောကျတတ်တဲ့ ပုံပြင်တွေကို ဖတ်ပြလေ့ ရှိပါတယ်… တစ်ည … ဂျင်နီ့အဖေက ပုံပြင်ဖတ်ပြလို့ ပြီးသွားတဲ့အခါ ဂျင်နီ့ကိုမေးပါတယ်…
“ဂျင်နီ.. သမီးလေး ဖေဖေ့ကို ချစ်တယ်မဟုတ်လား ”
“ အို..သမီးချစ်တာ ဖေဖေသိပါတယ်… သမီး အရမ်း ချစ်တာပေါ့ဖေဖေရယ်… ” ဂျင်နီလေးက ပြန်ဖြေပါတယ်…
“ ဖေဖေ့ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် သမီးရဲ့ ပုလဲဆွဲကြိုးလေး ဖေဖေကို ပေးပါလားသမီး ”
“အိုး ဖေဖေရယ် ..ပုလဲဆွဲကြိုးလေးတော့ မယူပါနဲ့နော် .. ရိုစီ ဆိုတဲ့အရုပ်လေး ဖေဖေယူလိုက်နော်… ဖေဖေမှတ်မိသေးလား ..မနှစ်က သမီး မွေးနေ့တုန်းက ဖေဖေပေးထားတဲ့ သမီး အရမ်းသဘောကျတဲ့ အရုပ်လေးလေ.. နော်ဖေဖေ..အဲဒါလေး ယူလိုက်နော်..”
“တော်ပါပြီ သမီးလေးရယ်… ရပါပြီ…….ဖေဖေ မယူတော့ပါဘူး …သမီးလေး အိပ်တော့နော်.. ဂွတ်နိုက် ” သူမပါးလေးကို နမ်းလိုက်ပြီး သူ့အဖေက ပြောလိုက်ပါတယ်..
တစ်ပတ်လောက်ကြာပြန်တဲ့အခါ.. သူမအဖေက ဂျင်နီကို မေးပြန်တယ်.
“ သမီး ဖေဖေ့ကိုချစ်လား”
“ဟုတ်ကဲ့ ချစ်ပါတယ်ဖေဖေ ”
“ဒါဆို သမီးရဲ့ ပုလဲဆွဲကြိုးလေး ဖေဖေ့ကိုပေးနော်..”
“ပုလဲလေးကိုတော့ မယူပါနဲ့ဖေဖေ… ဖေဖေ့ကို သမီးရဲ့ မြင်းရုပ်ကလေးပေးပါ့မယ် ..အဲဒီအရုပ်လေးဟာလည်း သမီးအကြိုက်ဆုံး အရုပ်လေးပါ… သူ့အမွှေးလေးတွေက အရမ်းနူးညံ့တော့ အဲဒါလေးနဲ့ ကစားရတာ ဖေဖေသဘောကျမှာပါ… ဆံကျစ်လေးတွေ ကျစ်ပြီးဆော့လို့လဲရတယ်လေ ဖေဖေရဲ့…”
“ကဲကဲ…. ဖေဖေမယူတော့ပါဘူး…. သမီးလေးအိပ်တော့….အိပ်မက်လှလှလေးမက်ပါစေနော်…” ပြောပြီး သူမအဖေက ဂျင်နီရဲ့ပါးလေးကို အသာအယာ နမ်းလိုက်ပါတယ်..
ရက်ပေါင်းတော်တော်လေး ကြာသွားပြီးတဲ့တစ်နေ့…. ဂျင်နီ့ဖေဖေက ပုံပြင်ဖတ်ပြဖို့ သူမကုတင်လေးဆီကို ရောက်လာတဲ့အခါ ဂျင်နီလေးက ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေခဲ့ပါတယ်.. သူမနှုတ်ခမ်းလေးတွေ တုန်ရီနေပြီးတော့ “ ဖေဖေ …ဒီမှာကြည့် ” လို့ပြောပြီး လက်ဝါလေးကို အသာ ဖြန့် ပြလိုက်ပါတယ်… လက်ထဲမှာတော့ သူမ အရမ်းနှစ်သက် သဘောကျတဲ့ ပုလဲ ဆွဲကြိုးလေးပါ.. ဆွဲကြိုးလေးကို သူမအဖေရဲ့ လက်ထဲကို ထည့်ပေး လိုက်ပါတော့တယ်… သူမရဲ့ဖေဖေက လက်တစ်ဘက်က ဂျင်နီရဲ့ ပလပ်စတစ် ပုလဲဆွဲကြိုးလေးကို ဆုပ်ကိုင် ထားရင်း နောက်လက်တစ်ဘက်နဲ့ သူ့အင်္ကျီအိပ်ထဲကို အသာ နှိုက်လိုက်ပါတယ်..
လက် ပြန်အထုတ်မှာ အပြာရောင် ကတ္တီပါ ဘူးလေးတစ်ဘူး ….
ဘူးလေးရဲ့ အထဲမှာတော့ အလွန်လှပ အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ ပုလဲအစစ် ဆွဲကြိုးလေး တစ်ကုံး……
သူမအဖေရဲ့ လက်ထဲမှာ ဒီပုလဲအစစ်လေးက ဂျင်နီကို ပေးဖို့ တစ်ချိန်လုံး ရှိနေခဲ့ပါတယ်…ဈေးပေါပေါ ပလပ်စတစ် ပုလဲလေးကို ဂျင်နီလေး စွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့တစ်နေ့ ပုလဲအစစ် ဆွဲကြိုးလေးကို ပေးနိုင်ဖို့အတွက် စောင့်နေခဲ့တာပါ….
ကျွန်မတို့တွေရဲ့ ဘ၀မှာ မကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်၊ မပေါင်းသင်းအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ၊ မလိုလားအပ်တဲ့ ၀ါသနာ ၊ စရိုက်တို့အပေါ်မှာ ငြိတွယ် စွဲလန်း နေတတ်ပြီး စွန့်လွှတ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲလေ့ ရှိပါတယ်… အဲဒီ မလိုလား အပ်တဲ့ စရိုက်တွေ၊ ၀ါသနာ၊ အပေါင်းအသင်းတွေကို စွန့်လွှတ် လိုက်ခြင်း အားဖြင့် ဘ၀မှာ အလွန် အဖိုးထိုက် တန်တဲ့ အခွင့်အရေးကောင်းတွေ လက်ကမ်း ကြိုနေတတ်တာကို သတိပြု သင့်လှပါတယ်… ကျွန်မတို့ရဲ့ လက်ရှိ အလုပ်၊ ဘက်ရှိဘ၀လေးမှာ သာယာ ကျေနပ်နေတတ်ပြီး နောက်ထပ် ခြေလှမ်း တစ်ဆင့် တက်နိုင်ဖို့၊ စွန့်စားဖို့ ၀န်လေး နေတတ် ကြပါတယ်… စွန့်စားမှု၊ စွန့်လွှတ်မှု မရှိဘဲ အခွင့် အရေး ကောင်း တစ်ခုခုကို ဆုပ်ကိုင်မိဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်….. တစ်စုံတစ်ခုကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရပြီဆိုရင် သူ့နေရာမှာ သူ့ထက် ပို တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုခု အစားထိုး ပြန်ပေးဖို့ အဆင်သင့် စောင့်နေပါတယ်ဆိုတာ ဒီ story လေးက ပေးလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာလေး တစ်ခုပါ….
Pearls ( Unknown Author) ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။
ခြီကာဂိုသှား တောလား - ၃